Nkọwa 2 Xls | ThatsLuck.com
26 / 04 / 2021 28 / 12 / 2020 di wp_136893
Akụrụngwa iji nyefee nọmba roulette na ntanetị na ntanetị
Ọ bụrụ na ị jiri Excel iji zụlite usoro roulette gị, Ntọala 2 Xls ọ ga-abụrịrị akụkụ nke akụrụngwa ngwanrọ gị.
Ekele maka igwe ihe eji egwu software Screen Capture Engine ọhụụ ọhụrụ na-emepe maka mmemme nke ọdịnihu nke ThatsLuck.
Ebe m nyefere ndị ọzọ akụkụ nke ude nke online roulette nọmba ka ihe kwurula software, n'ezie, na-enye m ohere ime ka mmepe akụkụ nke ọhụrụ ngwa n'ezie dabere na ọtụtụ ihe ngwa ngwa, gụnyere nke a ọhụrụ software site ThatsLuck, nke m kpọrọ aha Ntọala 2 Xls.
Tupu ịga n'ihu na-echeta nke ahụ ThatsLuck I nwekwara ike ichota free ọdịnaya, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-emelite na akwụkwọ denye aha na ọwa na ► YouTube.
Jiri mpempe akwụkwọ Xls iji kpọọ roulette
Ekwenyere m na ozugbo mmemme na asụsụ a kapịrị ọnụ, Excel bụ sọftụwia kachasị mma iji zụlite ma nwalee usoro maka merie na ntanetị.
N'ezie, enwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye mpempe akwụkwọ ebugharị maka roulette, yana ọtụtụ puku ndị ọrụ bụ ndị, maka nnukwu ikike nke Excel, nwere ike ịmepụta mpempe akwụkwọ Xls.
Nanị nsogbu bụ na ọ bụrụ na anyị ekepụtala mpempe akwụkwọ anyị, anyị ga-eji aka anyị tinye nọmba roulette n'otu oge.
N'ihi software ọhụrụ ahụ Ntọala 2 Xls ọbụna usoro a na-agwụ ike nwere ike ịbụ akpaghị aka, yana uru niile metụtara ya.
Roulette 2 Xls: kedu ka esi eji sọftụwia?
Ntọala 2 Xls ọ dị mfe iji, n'eziokwu ọ bụ naanị ịmepe tebụl cha cha, akwụkwọ mpịakọta Excel anyị na ngwanrọ maka ijide ọnụọgụ ahọrọ nke akpaka. Screen Capture Engine.
Usoro ihe omume na-abịa na a ole na ole dị mfe nhọrọ: n'aka nri, ihe atụ, e nwere ndị niile na ntọala maka Emegide Njikọ; ọ bụrụ n’ezie na anyị chọrọ ịpụ ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị Ntọala 2 Xls iji nakọta data, gbanye nhọrọ a na obere roulette ọ bụla na-atụgharị bot ga-agba na uhie na oji na otu otu, naanị iji ghara ịpụ na cha cha.
Enwekwara ike ijide n'aka na mpempe akwụkwọ Xls anyị na-anọgide na-aga n'ihu na desktọọpụ, ọbụlagodi mgbe anyị pịa ịkụ nzọ na tebụl roulette, iji mezuo nke a họrọ nhọrọ ahụ Excel Na Top Set, ma nke a bụ naanị mgbe ịhọrọ windo Excel site na menu ndọpụta.
Ihe ndi ozo di na aka nri metutara ndi a gha abanye ka ichota isi ihe di iche na ihuenyo kwekọrọ na uhie / oji na nke kacha nta ka a họrọ maka nzọ.
O doro anya, ọ bụrụ na ịdekọ nọmba anyị ga-eji mpempe akwụkwọ Excel anyị egwu, ọ gaghị adị mkpa iji rụọ ọrụ a.
Site na Roulette na spreadsheet Excel gị: otu esi ebufe data
N'aka ekpe nke usoro ihe omume ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị ga-ebufe data na mpempe akwụkwọ Xls, n'eziokwu ị nwekwara ike ịdekọ nọmba mmepụta ma chekwaa ha na faịlụ ederede maka nzube ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji uru Excel niile mepụtara maka roulette, pịa nhọrọ ahụ Iji Xls Cell ma họrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe nọmba mgbe niile na otu cell nke mpempe akwụkwọ Xls gị (nhọrọ Otu Cell),, ma ọ bụ tinye ha otu otu na kọlụm, na-amalite site na sel a kapịrị ọnụ (nhọrọ Na Kọlụm).
Na mpaghara abụọ ahụ WEPỤTARA ozugbo ị ga - etinye mkpụrụ edemede mbụ nke mkpụrụ ndụ ahọpụtara na nọmba sel.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ inata data na kọlụm bidoro sel D14 nke mpempe akwụkwọ gị, ị ga - abanye‘ D ’na mpaghara aka ekpe yana‘ 14 ’n’aka nri.
N'oge a ị ga-pịa bọtịnụ ahụ Malite na software weghara Screen Capture Engine (nke doro anya na a ga-ahazi ka ị hụlarị na nkuzi dị iche iche na ► YouTube) ma ọ bụrụ na edozila ihe niile n'ụzọ ziri ezi, a ga-ebufe nọmba ọ bụla roulette na mpempe akwụkwọ Xls gị, kpọmkwem ebe ịchọrọ!
Daashi: Xls mpempe akwụkwọ maka Roulette Statistics!
con Ntọala 2 Xls Ejikọtakwara bụ mpempe akwụkwọ Xls guzobere maka nhazi akpaka Ọnụ ọgụgụ Roulette, nke ị nwere ike iji mee nyocha niile iji mụta otu esi erigbu ikike nke ọhụụ a roulette software.
A na-echekwa mpempe akwụkwọ Xls site na paswọọdụ imeghe (paswọọdụ bụ otu ihe ahụ dị ka software ebighị koodu), nke ị nwere ike iwepu.
Nbudata Nbudata	R2Xls.zip - 2 MB
Categorie ruleti Nkeji edemede